In Zimbabwe, grave of Cecil Rhodes draws tourists, debate | Fox News
In this Feb. 26, 2017, photo, the burial site of Cecil John Rhodes is seen at Matobo National Park in Zimbabwe. The remains of British imperialist Cecil John Rhodes lie under a slab of stone atop a granite hill in Zimbabwe, largely unscathed by political ferment over a man whose colonial legacy rankles many in Africa nearly a century after his death. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (The Associated Press)
In this Feb. 26, 2017, photo, a visitor stands on the burial site of Cecil John Rhodes at Matobo National Park in Zimbabwe. The remains of British imperialist Cecil John Rhodes lie under a slab of stone atop a granite hill in Zimbabwe, largely unscathed by political ferment over a man whose colonial legacy rankles many in Africa nearly a century after his death. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (The Associated Press)
In this Feb. 26, 2017, photo, tourists visit the burial site of Cecil John Rhodes at Matobo National Park in Zimbabwe. The remains of British imperialist Cecil John Rhodes lie under a slab of stone atop a granite hill in Zimbabwe, largely unscathed by political ferment over a man whose colonial legacy rankles many in Africa nearly a century after his death. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (The Associated Press)
MATOBO NATIONAL PARK, Zimbabwe – The remains of British imperialist Cecil John Rhodes lie under a slab of stone atop a granite hill in Zimbabwe, largely unscathed by political ferment over a man whose colonial legacy rankles many in Africa nearly a century after his death.